आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ? – दैनिक नेपाल न्युज
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा सुनको भाउ ह्वात्तै घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको हो । आज छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।अघिल्लो दिन प्रतितोला छापावाल सुन ७३ हजार ४ सय मा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ७२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । बिहीबार तेजाबी सुन ७३ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।सुनको भाउसँगै आज चाँदीको भाउ पनि ह्वात्तै घटेको छ । आज चाँदीको भाउ प्रतितोला ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । हिजो चाँदी ८ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
सप्तरीको हनुमाननगरमा १० किलो तौल भएको अजिङ्गर फेला
हुने भयो कलुवापुर–बेलौरी सडक कालोपत्रे